पुरा हुन नसकेको शक्तिको त्यो सपना…………. | Hamro Khelkud
पुरा हुन नसकेको शक्तिको त्यो सपना………….
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका भेट्रान पूर्व स्पिनर खेलाडी शक्ति गौचनले घरेलु क्रिकेटबाट पनि विश्राम लिएका छन् । उनले एभरेष्ट प्रिमियर लिग (इपीएल) मा पोखराबाट चितवनविरुद्ध शनिबार अन्तिम खेल खेले ।
टोलीका खेलाडीले शक्तिलाई गार्ड अफ अर्नरको सम्मान दिदै मैदान परिक्रमा गराए । मैदानमा शक्ति, शक्तिदाई भन्दै फ्यानले पुरै टियू क्रिकेट मैदान गुन्जाउदा उनि निकै भावुक देखिए । शक्तिको आँखा रसाई रहे ।
सन् २००१ मा बंगलादेशमा भएको एसीसी यू–१७ एसिया कपदेखि शक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न सुरु गरेका थिए । अर्को वर्ष सिंगापुरमा एसीसी ट्रफीबाट उनले राष्ट्रिय टोलीबाट ‘डेब्यू’ गरेका शक्तिल टी-२० विश्वकप,डिभिजन ५,४ र ३ को उपाधि जिताउदै वान डे मान्यता पाउँदा नेपाली टोलीको मुख्य हिस्सा बने ।
अगस्ट १ मा नेदरल्यान्ड्समा भएको पहिलो वान–डे अन्तर्राष्ट्रिय खेलबाट शक्तिले विदेशी भूमिमा आफ्नो खेलजीवन टुंग्याइसकेका थिए । उनले नेपालमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय खेलबाटै घरेलु दर्शक सामु पूर्ण रूपमा संन्यास लिने चाहाना राखेका थिए । तर शक्तिको त्यो सपना पुरा हुन सकेन ।
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) आईसीसीको निलम्बनको रहेको अवस्थामा शक्तिले आफ्नो सपना पुरा हुने नदेखेपछि इपिएललाई नै आफ्नो अन्तिम खेल बनाए । गार्ड अर्फ अर्नर साथै मैदान परिकर्मापछि शक्तिले केहि समय पत्रकार सम्मेलनमा बोले ।
निकै भावुक देखिएका शक्ति सदा जस्तो हास्न खोजि रहेका थिए ,तर मलिन अनुहारले उनलाई हास्ने अनुमति दिएन । उनका आँखा रसाई रहे । शक्तिको मूखमा नेपाली क्रिकेट भन्दा अन्य कुनै शब्दै थिएन ।
निकै भावुक हुदै भने ‘यो क्षण मेरा लागि एक अविस्मरणिय हुने छ । हुन त मेरो घरेलु मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेर अन्त्य गर्न चाहान्थे तर सफल भएन । अझ आफुले नेपाललाई च्याम्यिनसिप लिग जिताउदै सन्न्यास सपना राखेको थिए, पुरा हुन सकेन । म इन्डियाबाट खेलेर नेपाल आएको हु । यू-१७ मा बंगलादेशसँग खेल्दा जब नेपालको राष्ट्रिय गान बज्यो त्यहि समय देखी मेरो अन्तरआत्माले पनि नेपाल र नेपाली क्रिकेटलाई केहि गर्नु पर्छ भन्यो । म नेपाली क्रिकेटमा लागे ‘
शक्तिले नेपाली क्रिकेट टोली र ग्राउन्डलाई मिस गरि रहने बताए । अब शक्तिले नेपाललाई १० र १५ वर्ष भित्र नेपालले टेस्ट नेशनको मान्यता पाउन सक्ने र त्यहि अनुसार आफुअघि बढ्ने बताए । उनले थपे, ‘हुन त अहिले टेस्ट नेशनको कुरा गर्दा धेरैले पत्याउदैनन्,हामी विश्वकप खेल्छौ भन्दा पनि कसैले पत्याएका थिएनन् तर हामीले खेलेर देखायौ । अव मेरो मिशन नेपाललाई टेस्ट राष्ट्र बनाउने हो । सबैको साथ पाए १०र १५ वर्षभित्र पाइन्छ होला ।’